Window တင်ဖို့လေ့လောနေတယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ ပညာလေးတစ်ခု
ဒီနည်းလေးက ၀င်းဒိုးတင်နေရင်း တိုင်ပတ်သွားတဲ့ ပြဿနာလေး တစ်ခုပါ တင်နေစဉ်
အတွင်းမှာ Error c000021 တက်လာတယ်။ အဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလိုက်ရှာ
လိုက်တာ အဆင်ပြေစွာ အောင်မြင်သွားတယ်။ ထို့ ကြောင့် တိုက်ဆိုင်သူများ ရှိပါက
လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်ရန် မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ရပါသည် ။ မူရင်းဆိုဒ်မှ ကူးယူတင်ပြချင်းပါ...။
This isalist of the possible fixes I have found.
1 Turn off UDMA in BIOS
2 Replace bios battery
3 Replace the hard drive
4 Tryadifferent cd rom
မူရင်းဆိုဒ်မှာလေ့လာပါ - http://www.techsupportforum.com/forums/
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:23 AM0comments
Labels: ကွန်ပျူတာ, နည်းပညာ
Window7နဲ့window XP အတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့Genuine Remover
ဒီပြဿနာကိုတော့ ကျနော် ဖိုးခွားတို့ ဆီသွားလည်ထဲက တွေ့ ရပါတယ် ညီညီ
ကွန်ပျူတာကလည်း အတူတူပါပဲ Window တင်ပီး Active Key မရှိတော့ဖြစ်
တတ်သလို Update လုပ်ရင်လည်း အလားတူပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှ
အားလုံအတွက် ပညာဖြစ်အောင် ရေးတင်လိုက်ပါတယ် ဘယ်နေရာမှာသုံးရ
သိချင်ရင် Window Update လုပ်ကြည့် Orginal တင်မထားဘူးဆို Geniune
ဖြစ်တယ် ဆိုတာတက်လာမှပဲအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ် ခါ
ထားလိုက်ပါတယ် Window7 ရော Xp အတွက်ပါ တစ်ခါထဲ ယူထားလိုက်ပါ
နောက်တစ်ခုကWindow genuine ဖြစ်နေရင်Miscrosoft Security Essensial
ဒီမှာ Download ယူပါ Window Genuine Remover For7and XP
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:22 AM0comments
ဒီစာအုပ်လေးက window7သုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်လို့ တင်
ပေးလိုက်တယ် အခြေခံပညာသင်တွေ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်
ဒီမှာDownload ယူလိုက်ပါ.. Window7 အသုံးပြုနည်းအသေးစိတ်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:20 AM0comments
Window XP တင်နည်းစာအုပ်လေးပါဆောင်ထားနော
ဒိုးကျရုံပေါ့ပျက်လည်းဘာမှမပူနဲ့ ဆိုင်ပို့ ..အဲကျနော်နဲ့ ဆက်
ဆက်သွယ်လို့ ဆိုင်သွားလည်း5000ပေးရတာပဲကျနော်တို့ 
Window xp Orginal CD ရှိတော့ပြန်တင်လိုက်ခဏလေးပဲ
ဘာData မှမပျက်ဘူး Partition ခွဲထားတာပဲပျက်ချင်းပျက်
C ထဲပဲပျက်တာကိုယ့်ရဲ့Data တွေကိုတော့D ထဲသိမ်းဖို့ တော့
မမေ့နဲ့ စမ်းသပ်ချင်ရင်တော့Window XP CD ခွေဝယ်လို့ ရ
စာအုပ်ကဒီမှာယူ..Window Xp တင်နည်းစာအုပ်
ကြပါစေလို့.......................။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:19 AM0comments
Window7တင်နည်းစာအုပ်လေးပါ
ကတောင်းလို့ တင်ပေးတာပါအဆင်ပြေပါစေpoepin ရေ..
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:17 AM0comments
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျုတာထဲမှာ အင်စတောလုပ်ပီး သုံးဖို့အဘိဓာန်ဆော့ဝဲ
ကောင်းလေးပါ တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခု ပြောင်းသုံးချင်ရင်ယူထားလိုက်ပါ အသေးစိတ်ကို
မူရင်းလင့်မှာဖတ်ကြည့်ပါ Unicode Font ရှိမှရမှာနော် ကဲလိုချင်ရင်ဆွဲ.................။
ဒီမှာ Download ယူပါ Showyoe မြန်မာ <= = => အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
မူရင်းလင့် - http://www.myanmartutorials.com/announcements/shweyo
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:15 AM0comments
Labels: (စာအုပ်များ)ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ, နည်းပညာ
သူ့ အကြောင်းတော့သတင်းနဲ့ အတူရေးပြီးပါပြီစာအုပ်ဖတ်ချင်တဲ့သူအလွယ်ရှာတွေ့ 
ဒီမှာသွားပြီးDownload ယူပါ. Felling35(စိုးမြတ်သူဇာအတ္ထုပ္ပတ္ထိ)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:14 AM0comments
အခုမှပေါ်တာလေးထင်တာပဲအခုမှတွေ့ လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်အလွယ်တကူ
ပြေသေးတယ်အရင်Wxpidytထက်ကောင်းတယ်အဲ့အဘိဓာန်က360နဲ့ Scan ဖတ်ပြီး
၇ှင်းလိုက်တာTrojam virus ပြနေတာနဲ့ ဖျက်ထုပ်လိုက်တာအခုအသစ်ရပြီဒါလေးက
မူရင်းဆိုဒ်မှာ Download ယူလိုက်ပါ Computer English-Myanmar အဘိဓာန်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:13 AM0comments
ဒီမှာDownload ယူပါ ကွန်ပျူတာအတွက်English <> Myanmar အဘိဓာန်ဆော့ဝဲ
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:12 AM0comments
ကွန်ပျုတာသုံးနေရင်း ပုံတွေရိုက်ယူချင်ရင် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခု
ဒီနည်းက Window7မှာပါတဲ့ Snapping Tools ကိုသုံးပြီးရိုက်တာ( Window7only)
ဒီနည်းလေးကလည်း လွယ်ကူပါတယ် ။ Window7 မှာပါလာပြီးသားSnipping Tool
ကိုသုံးပြီး လိုချင်တဲ့နေရာကို ဓာတ်ပုံအဖြစ် ရိုက်ယူလို့ ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲတွေသုံးပြီး
လုပ်ရင်လည်းရသလို Print Scrn Sysrq နဲ့ လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အခုဒီနည်းက
ဘာဆော့ဝဲမှ ထပ်မလိုပါဘူး ။ Window တင်ထဲက Miscrosoft က ထည့်ပေးလိုက်
ပြီးသားပါ ။ Search ကနေ Snapping Toolလို့ ရိုက်ရှာရင်လည်း ရပါတယ် ။ အဲ့လိုမှ
မဟုတ်ရင် Start => All Programs => Accessories ကနေ ယူလိုက်ရင်လည်း
ရပါတယ် Video ကြည့်နေရင်းလည်း လိုချင်တဲ့နေရာတွေကို ဖြတ်ရိုက်လို့ ရပါတယ်
အခုလိုရိုက်ယူတဲ့ နည်းလမ်းတွေက အခြေခံပညာသင်တွေ တတ်ထားသင့်ပါတယ်
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကွန်ပျုတာသုံးနေရင်း နားမလည်တဲ့ နေရာတွေကို ပုံအဖြစ်
ရိုက်ပြီး နားလည်တဲ့သူတွေဆီကို မေးမြန်းလို့ လွယ်တယ် အဲ့တော့ မဖြစ်မနေ တတ်
ထားသင့်တဲ့ ပညာလေးတစ်ခုအဖြစ် ယူဆမိပါကြောင်း...................................။
နောက်ထပ် နည်းလမ်း - ၁ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ နဲ့Video Record လုပ်နည်း Fs63
နောက်ထပ်နည်းလမ်း - ၂ Keyboard ကနေ Print Scrn Sysrq သုံး၍ ရိုက်နည်း
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:09 AM0comments
ဘလော့ဂါများနဲ့အခြေခံညာသင်တို့ အတွက် ပုံရိုက်ဖို့၊ Record လုပ်ဖို့ Fs63
အခုတင်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့ရိုက်လို့ ရသလို Print Sys Rq နဲ့ လည်းရတယ်နော် နမူနာရိုက်ပြတာ
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျုတာထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်သလိုမျိုး အသုံးပြုချင်ရင် အဆင်
ပြေစေနိုင်တဲ့ Portable လေးတစ်ခုပါ ကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ Print Screen ကိုနှိပ်ပြီး Paint
မှာ Paste လုပ်ရင်လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ။ ဘလော့ရေးသူတွေ အနေနဲ့ လည်း
အကြောင်းရာတစ်ခုခုကို ရှင်းပြချင်တဲ့အခါ ကွန်ပျုတာထဲက ပုံလေးတွေကို ရိုက်ယူဖို့ 
လိုပါတယ် နောက်တစ်ခုက Video recording ဖိုင် လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ မိမိရှင်းပြ
လိုတဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုအကြောင်း နည်းပညာတစ်ခုအကြောင်း နမူနာလုပ်ပြနေတဲ့ အခါ
ကွန်ပျုတာမှာ ကိုယ်လုပ်နေသမျှကို Vedeo file အဖြစ် Recording ယူမှာဖြစ်ပါတယ်
ဘလော့ရေးသူ ၊နည်းပညာအကြောင်းရှင်းပြသူတွေအတွက် အတော်လေးအသုံးဝင်မဲ့
ဒီမှာ Download ယူပါ - Fastone Screen Capture (Portable )
ဒီမှာလည်း ယူလို့ ရတယ် - http://www.portablefreeware.com/?id=775
အသေစိတ်မူရင်းလင့်မှာ ဖတ်ပါ - http://www.faststone.org/FSCapture
A small handy Capture Panel that provides quick access to its capture tools
Capture windows, objects, menus, full screen, rectangular/freehand
Draw annotation objects such as texts, arrowed lines, highlights, watermarks,
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:08 AM0comments
Labels: ကွန်ပျူတာ, နည်းပညာ, ဝဘ်ဆိုက်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:07 AM0comments
ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြီးကြီးပါပြောချင်တာကတော့Print Preview ကြည့်မရလို့ error
တက်လာဖူးလားမသိဘူးကျုပ်တော့အခုမှကြုံတာပဲExcel နဲ့ စာရိုက်ပြီးPrintPreview
(၁) Window +R ကနေ Run box ခေါ်လိုက်ပါ
(၂) Run box ထဲမှာ services.msc လိုရိုက်လိုက်ပါ
(၃)ပေါ်လာတဲ့အထဲမှာမှ Print Spooler ရှာပြီး2ချက်နှိပ်ပါ
(၄)ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဘောက်မှာ Startup Type မှာ Automaticပြောင်းပြီOk လုပ်
Computer ကိုRestart လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ....။လုပ်နည်းကတော့အများ
ရအောင်ကဲလေ့လာကြည့်.ရနေလည်း Services.msc တောရိုက်ကြည့်လေ့လာစရာ
ရင်Manual ပေးပြီး Restart လုပ်စာစီစာရိုက်လုပ်ပြီး Preview ကြည့်ကြည့်ရလားလို့ 
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:05 AM0comments
(၁) Window+R ကနေ Runbox ခေါ်လိုက်ပါ
(၂)Runbox ထဲမှာ msconfig လို့ ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ
(၃)Start up ထဲမှာမလိုအပ်တာတွေဖြုတ်ပါ Apply လုပ်ပြီး Ok နှိပ်ပါ
ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကိုRestart ပြန်လုပ်ပြီးမှာသုံးပါအဲ့ဆိုမြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့...........။
အရေးကြီးတာတွေမပိတ်သင့်ပါသိချင်ရင်ဒီမှာဖတ်ကြည့်နော် Disable မပေးလိုက်နဲ့ 
ချင်းသုံးမရလို့ စောင့်ရတဲ့ဝဋ်ကနေကျွတ်တာပ(မြန်လာလိမ့်မယ်)တဲ့လို့ ရေးတာကသူ
များရေးတာဖတ်လိုက်ရလို့ ပါဒီနေရာမှာ Disable all ပေးပြီးလုပ်ရင်ပိုမြန်တာတွေ့ ရ
ရရင် Disable all မလုပ်သင့်ပါဘူး Startup မှာအရေးကြီးတဲ့Program တွေနဲ့ အမြဲ
တမ်းAuto Loading ဖြစ်နေသင့်တာတွေရှိပါတယ်ဥပမာ Anti Virus ဆော့ဝဲဟာ
ကွန်ပျူတာဖွင့်တာနဲ့ ဝင်းဒိုးစတက်တာနဲ့ Runနေသင့်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအရေးမကြီး
တဲ့ဟာတွေ၇ှိပါတယ်Startup ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်အတိုပြောရရင် Adobe,Real
player,Cyber link,Nero,yahoo massager,google talk,Power DVD,VZO ဘာညာသရကာနေကြာကွာစိတွေပေါ့ဗျာအများကြီး၇ှိပါသေးတယ်တစ်ခုနဲ့ တခုမတူ
တယ်ကွန်ပျူတာဖွင့်တာနဲ့ အဲ့Program တွေကိုloading မစောင့်ရတော့ဘူးလေပြီး
ရတာနဲ့ စောင့်နေရလို့ ကြာတာပါဒီတစ်ခါတော့တဲ့လိုမရေးတော့ဘူးကျုပ်အမြင်မလို့ 
တော့မပေးနဲ့ နော်.မြန်လွန်းလို့ ဝင်းဒိုးပါကျသွားမယ်.........။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:03 AM0comments
တခုကfont﻿တွေအ﻿ကြောင်းပါ၊တချို့ ကွန်ပြူတာ﻿တွေမှာဆိုရင်မြန်မာလို ဖတ်လို့ရ﻿
အခြေခံပညာသင်တွေကွန်ပျူတာဝယ်ရင်ဘာဝယ်လို့ ဝယ်ရမှန်းဘာကြည့်လို့ ကြည့်ရ
(၁)ကိုယ်ဝယ်မယ့်ကွန်ပျူတာBrand ပေါ့ Dell လား Acer လား Compaq ,Sony,
Toshiba,Lenovo အများကြီး၇ှိပါသေးတယ်အများသုံးတစ်ခုကတော့ Acerပေါ့
MSI လည်းမဆိုးဘူးDell ကတော့ဈေးနဲနဲပိုမယ်ကောင်းတဲ့တံဆိတ်ယူရင်ဈေးပို
(၂)နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ System ပေါ့လူတိုင်းကတော့မြန်တာကို
ပဲလိုချင်ကြတာလေကွန်ပျူတာကိုအရမ်းသွက်စေချင်တာ Copy ကူးရင်လည်းမြန်
တွေမပြောတော့ဘူးဗျာအခုဝယ်မယ်ဆို Window7နဲ့XP တစ်ခုခုကိုယူ Processor
AMD ,Intel,အခုပေါ်နေတဲ့ i3,i5,i7ဆိုတာတွေကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့တစ်ခုခုယူ
RAM memory ကတော့အရေးကြီးပြီWindow7ဆိုလို့ ကတော့ အနဲ့ ဆုံး2GB DDR2
DDR3 တစ်ခုခုယူမှရမယ်ဘာလို့ လည်းဆိုတော့Ram 1GB နဲ့ ဆိုမနိုင်ဘူးဗျXP ဆို
တယ်Window7ကတော့ Desktop ပေါ်မှာပြက္ခဒိန်လေးနာ၇ီလေးတွေအလှဆင်နိုင်
ရင်တော့မထူးပါဘူးဈေးချိုတာပဲယူလိုက်ပါအခြေခံတွေပဲလေUpdate တော့လုပ်လို့ 
နဲနဲတော့ဖြဲလို့ ရတာပေါ့ RAM Memory နဲ့Hardisk Memory ကိုတော့မလွဲစေချင်
Desktop ပေါ်ကMy Computer ကိုRightClick(လက်ခလယ်)ထောက်လက်ခ
Propertiesကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာပြီ Window Ram နဲ့ Processor တွေပေါ့
၀ဲတွေထပ်ထည့်လို့ ရပါတယ်ဘာပဲလုပ်ချင်ချင်ပေါ့ဥပမာPhotoShop စာစီစာ
ရိုက်Miscrosoft တွေနဲ့ Applicationတွေအားလုံးပေါ့ပြီးမှထည့်လို့ ရပါတယ်ကဲ
ရှိမယ်ဆိုခဏလေးနဲ့ အဆင်ပြေမှာမလို့ ခေါင်းထဲထားစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဒီ
ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့Safe Mood အကြောင်းလေးပါ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုShut Down မချပဲ Power ကနေပိတ်လိုက်
တာကွန်ပျူတာကအဲ့လိုပိတ်ရင်Window မှာပြဿနာတက်သွားနိုင်ပါတယ်ဖိုင်တစ်ချို့ 
အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ ဝင်းဒိုးတက်မလားတော့မှကျနော်သိတာသေပီဆရာပဲပြန်လုပ်လို့ 
ချိတ်လို့ မရတော့UPS ခံထားရတယ်အဲ့လိုမှမခံရင်မီးခဏခဏပျက်ရင်ကွန်ပျူတာပါ
220အပြည့်ရှိတယ်မီးလည်ငြိမ်တယ်Window7က Xp ထက်အတိမ်းအစောင်းခံ
တာတွေ့ ရတယ်ဒါပေမယ့်ပြဿနာတော့များတယ် Ram 1Gb နဲ့ 7သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာ
တစ်ခုခုကြောင့်ပိတ်ခဲ့ရင် Safe Mood ကနေပြန်ပီးတက်ပါSystem Recover လုပ်အောင်လေအဲ့ဒါမှဖိုင်တွေမပျက်မှာဖြစ်သလိုဝင်းဒိုးကိုလည်းမထိခိုက်တော့
လာခင် F8 ကိုနှိပ်ထားပြီးSafe Mood ကိုမျှားလေးနဲ့ ရွေးပီး Enter နှိပ်လိုက်ရုံပါ
ပဲ အဲ့ဆို Safe ဖြစ်ပီ ခဏနေRestart ပြန်ချလိုက်ရင်အေးဆေးဖြစ်ပီရေးချင်တာ
အကြောင်း Window7 နဲ့XP ကွားခြားချက်တွေနဲ့ ဝင်းဒိုးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿ
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:01 AM0comments
ပါအကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတဲ့အခါအသံမလာတာ တို့ 
ရောက်စေပါတယ်ဥပမာကွန်ပျူတာအသံမလာတော့ဘူးမနေ့ ကအကောင်း ဒီနေ့ 
မှဖြစ်သွားတာဆိုရင်SystemRestore ပြန်လုပ်ပီးမနေ့ ကSetting ကိုပြန်ယူရင်အရင်
နေ့ တိုင်းအကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတစ်နေ့ ရုံကကွန်ပျူတာမှာဘယ်သူလုပ်လိုက်လဲ
တယ်ဆိုရင်လည်းRecycle Bin ထဲကျန်ရမှာဘယ်သူလုပ်လို့ ဘယ်လိုပြောင်းသွားမှန်း
ကိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးပုံစံက Windowပြန်တင်ခါစပုံစံဖြစ်နေတာဂျာကြီးလည်းမသိလို့ 
နေကအကောင်းကြီးအခုဒီနေ့ မှဖြစ်သွားတာဆိုရင်တော့ဒီနည်းနဲ့ အဆင်ပြေမှာသေ
ဒါတွေဆီမှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာkst2011@gmail တို့ ကိုလည်းအဆင်မပြေတဲ့နည်း
Start = All Program = Acceessories = System tool = System Recovery
ကိုဆက်တိုက်နှိပ်ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ရက်စွဲတစ်ခုပြန်ရွေး next ကိုနှိပ် Finished ကို
ဆက်နှိပ်ရုံပါပဲWindow Xp နဲ့Window 7လုပ်ပုံသိပ်မကွာသလိုဒီနည်းကသုံး
တတ်ရင်သုံးတတ်သလို အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဥာဏ်ရှိသလိုသုံးကြပါလို့ .......။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:59 AM0comments
ရင်ဘာမှမသိဘူးပြင်တတ်ချင်ရင်ဖတ်ပေါ့နော..၀ါသနာတူရင်စုဖို့ ပြန်မျှလိုက်တယ်ဒို့ 
ဒီမှာ Download ယူပါ Computer (လက်တော့) ပြုပြင်နည်း
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:58 AM0comments
အလွယ်တကူ Copy ယူနည်းလေးတစ်ခုနဲ့ မထင်မှတ်တဲ့နည်းလေးတစ်ခု
ဒီနည်းလေးကိုအမှတ်မထင်အခုမှတွေ့ တာမလို့ အမှတ်တရတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အ
ချို့ ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာကော်ပီယူလို့ မရအောင်ဆိုဒ်ပိုင်၇ှင်ကလုပ်ထားတတ်ပါတယ်အဲ့
ဘာမှမခက်ပါဘူးလိုချင်တဲ့ကဗျာတွေစာတွေကိုမောက်နဲ့ ဖိပြီး(Hightlight )ဆွဲလိုက်ပါ
ပြီးရင်ကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ Ctrl နဲ့ C ကိုတွဲနှိပ်ပါ သာမာန်Copy နည်းလေးတစ်ခုပေမယ့်
Java Script ကိုကျော်လို့ ရတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါ Right ကလစ်ကနေCopy
ယူလို့ မရပေမယ်Keyboard ကနေယူလိုက်ရင်ကူးလို့ ရပါတယ်ကျနော်စမ်းသပ်ပီးပါ
သလိုKeyboard ကနေCopy ယူပီး စာရိုက်တဲ့Miscrosoft Word ကိုဖွင့်ပြီ Ctrl နဲ့V
ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရင် Java Script နဲ့ ရေးထားတဲ့ကုဒ်တွေအလုပ်မလုပ်တာကိုတွေ့ ရပါ
တယ် Firefox Tools ကနေ Enable Javescript ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်လည်းရပါတယ် တခြားနည်းတွေအများကြီး၇ှိပါတယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးကတော့
Ctrl +C နဲ့ Copy ယူပီး Ctrl+V နဲ့Paste လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါကြောင်း
ကွန်ပျုတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီစာအုပ်လေးကအကူညီပေးပါလိမ့်
သင်ဖို့ အချိန်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့အခုလိုစာအုပ်လေးတွေဖတ်ရင်းနဲ့ ပဲအလုပ်
တာလေးတွေမလို့ လက်တို့ တာနောကဲဆွဲထားမယ်.....
ဒီမှာDownload ယူပါ ကွန်ပျုတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအခြေခံစာအုပ်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:57 AM0comments
၁။ Paint ကိုဖွင့်(Paint ဆိုတာကတော့ကွန်ပျုတာတိုင်းမှာပါရှိပါတယ်
ကတော့ Window7မှာ Start ကိုနှိပ် Search မှာpaint လို့ ရေးလိုက်
P နဲ့ စတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်WindowXPသမားတွေကတော့လုပ်
ရှင်းရှင်းပြောရရင်-အနုတ်ကလေးနဲ့ ပိတ်ထားTaskbar မှာဆင်းနေ
၂။ ရိုက်ချင်တဲ့ပုံရောက်ရင်Keyboard မှာPrint Screen Sys Rq လို့ 
၃။ ပြီးရင်Paint ကိုဖွင့်စောစောကကြက်ခြေခတ်နဲ့ ပိတ်ထားတဲသူတွေ
ရင်းရလာတဲဗဟုသုတက..Right Click နှိပ်ဆို နား၇ှင်းအောင် လက်
ခလယ်ကလစ် လက်ညိုးကလစ်နဲ့ ပိတ်ဆိုရင်လည်းကြက်ခြေခတ်နဲ့ 
လား..အနုတ်ကလေးနဲ့ လားဆိုတဲ့သူကပါသေးတယ်တချို့ ကတော့
Power ပါပိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျို့ ..
၄။ ဒါကတော့Paint ပွင့်လာရင်Edit ကနေ Paste နဲ့ ချလိုက်အဲဆိုရပြီ
၅။ပြီးရင် File ကနေ Save as နေSave လိုက်File type ကတော့
JPEGမှSaveနော်...PNG လည်းရပါတယ်..JPEG ကပိုပြီး KB
နဲမယ်ထင်လို့ ..အဲဆိုအဆင်ပြေကြမှာပါ( ဖတ်နေရင်းမပြုံးရ)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:56 AM0comments
Computerတိုင်းမှာရှိသင့်သော WinRAR ဆော့ဝဲလေးပါ ( System 32 & 64 )
ဒီဆော့ဝဲဟာ ကွန်ပျုတာတစ်လုံးမှာ ရှိနေသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ။ ဘာလို့ လည်းဆို
တော့ အဲ့ဆော့ဝဲမရှိတဲ့ အခါ အင်တာနက်က ဒေါင်းလုပ်ယူလာတဲ့ တစ်ချို့ ဖိုင်တွေ
ကိုဖွင့်လို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ Zip ဖိုင်ခေါ်မှာပေါ့မြန်မာMP3albumဆိုဒ်ကဒေါင်း
ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ် ။ကြားဖြတ်ပြောရရင်တော့Mp3 albumဆိုဒ်မှာသီချင်းတွေ
တော်တ်ာများများဒေါင့်လို့ ရတယ်ဗျ ။ဆက်ပြောရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျုတာထဲမှာ
WinRar winzip ဆော့ဝဲလေး ရှိနေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီမှာ Download ယူပါ - Win Rar for 32bit
ဒီမှာ Download ယူပါ - Win Rar for 64 bit
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:54 AM0comments
အထက်ပါပုံလေးတွေကိုသေချာလေ့လာပါ အခြေခံအနေနဲ့ 
မွားလေးတွေဆိုပေမယ် ကျွန် တော် စလေ့လာခါစတုန်းဆိုအ
တွေပါ 1GB မှာ 1000MB လို့အကြမ်းလေ့လာထားရင်ကိုအ
ပါပြောပြတာနော် နောက်ပိုင်းသီချင်းတွေEdit လုပ်တဲ့အခါ MP3
Mp4။MPEG/AAC/3GP ဆိုတဲ့ ဟာတွေလေ့လာတော့မယ်
Flash Song လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကို Memory အနဲအများပြောင်း
ဖို့ လိုလာပါပြီ Mp3 သီချင်းနဲ့ MPEG နဲ့ MP4 နဲ့ MB ကွာသွားတာ
Gmail သုံးနေရင်း သတိထားရမယ့်အချက်လေးတစ်ချက် (တန်ဖိုးရှိတယ်နော်)
Gmail Version အသစ်နဲ့ ပြတာမလို့အဟောင်းမှာလည်း အတူတူပဲနော် Details ကိုသာရှာကြည့်
ဒီနည်းလေးကတော့ ကိုယ့်အီးမေးကို ဘယ်နိုင်ငံကဖွင့်လည်း သိသာစေတဲ့ နည်းလေး
တစ်ခုပါ ။အကောင့်ဟက်ခံရပြီဆိုရင် ဟက်တဲ့သူက အကောင့်ကို ဖွင့်ကြည့်သေးလား
စစ်ကြည့်လို့ ရပါတယ် ။ဟိုးတလောက ဟက်တော့ ဟက်တာပဲ။ ဖိုးမောင် ဖွင့်မကြည့်
နဲ့ နော် ။ ဦးလေးဖွင့်မကြည့်နဲ့ နော် ဆိုတာတွေကြားရပါတယ်။ တကယ်လည်း ကျနော်
ဘယ်သူ့ အကောင့်မှဖွင့်မကြည့်ပါဘူး ။ချစ်သူအကောင့်က လွဲလို့ ပေါ့ ။ဖွင့်မကြည့်တာ
မချစ်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ Personal ကိုအလေးထားလို့ ပါ။အဲ့နည်းကလွယ်သလိုလိုနဲ့ 
ပြဿနာအတော်များတဲ့နည်းပါ ။လုပ်နည်းအသေးစိတ်တင်ပေးချင်ပေမယ့် တင်မပေး
တာကောင်းပါတယ် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အပိုင်းလေးတော့ အသေးစိတ်ရေးပါအုံးမယ်
အဟက်ခံရရင်တောင် ဖွင့်လားမဖွင့်လားဆိုတာ အခုဒီနည်းနဲ့ စစ်လို့ ရပါတယ် ။ အခု
ကျနော့အကောင့် နဲ့ နမူနာပြထားပါတယ် ။Malaysia IPမဟုတ်ပဲMyanmar IPနဲ့ ဖွင့်
နေတာ တွေ့ ရတယ်။ သူခိုးကတော့ အိမ်တွင်းသခိုး ဟန်ဂျီအင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့လို
ဖွင့်ရင် စာတန်းတစ်ခုပေါ်လာသေးတယ်။အခုနောက်ပိုင်း ဟက်ရတာမလွယ်တော့ပါ
Google ရဲ့ မြင့်မားလာတဲ့ Security တွေကြောင့် IP Location ကွာရင် ပတ်စ၀ပ်သိ
ပါလျှက်နဲ့အကောင့်ဖွင့်မရတာ ရှိပါတယ်။ မေးလိပ်စာတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်
တတ်တာကိုပြောတာ ဖွင့်မကြည့်ဘူး နောက်သတိ
ရှိဖို့ ပညာပေးတဲ့သဘောပါ။ပြဿနာတက်သွားကြတဲ့ စုံတွဲများလည်း တောင်းပန်ပါ၏
အခုလို ပြောတော့ သိလည်းသိရ ပညာလည်းတိုးတာပေါ့နော် ။ထို့ ကြောင့် သက်ဆိုင်
သူ မောင့်ကို စိတ်မခုကြပါနဲ့နောက် မဟက်တော့ပါဘူးလို့ အဲ့နည်းက မြန်မာလိုဆို
ငါးမျှားတဲ့နည်းပေါ့ အဲ့ထက်ရက်စက်တဲ့နည်း 2009 လောက်ကပဲ အဆင်ပြေသေးတာ
အခုဆိုရင် Google က Security ကို ထပ်တိုးလိုက်လို့ သိပ်သုံးမရတော့ဘူး ဒါပေမယ့်
ရရင်အဲ့နည်းက ပွဲချင်းပီး။အခုနည်းက ဘယ်သူဖွင့်လည်းစစ်ကြည့်ရုံပါပဲ အခြေခံပညာ
ဆိုတော့သာမာန် အခြေနေမှာပဲ ရမှာ ။ အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့ အထူးကုနဲ့ ပြမှရမယ်
မောင်တလုံးက အခုမှ လေ့လာ စမ်းသပ် ပညာရှာနေတာဆိုတော့ တွေ့ သမျှ ဝေရတဲ့
သဘောလေးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း Gmail သုံးရင် Details ကို မမေ့ပါနဲ့ လို့ ....။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:48 AM0comments
Labels: ကွန်ပျူတာ, ဂူးဂဲလ်, နည်းပညာ
ချစ်သူအကောင့်ကမေးတွေကိုယ့်ဆီအကုန်ဝင်လာအောင်လုပ်နည်းနဲ့ GmailGtalk အကြောင်းစာအုပ်လေး
Gmail Gtalk အကြောင်းစုံလင်အောင်ရေးထားပါတယ်အကောင့်အသစ်မလုပ်တတ
မေးတွေကိုလည်းခေါင်းစဉ်ခွဲလေးနဲ့ ထားလို့ ရပါတယ်ဥပမာချစ်သူဆီမှမေးများ
တော့ဟာသနော်အတည်မမှတ်ကြပါနဲ့ ..ကဲလက်တို့ လိုက်တယ်နော်.........
စာအုပ်ကိုဒီမှာDownload ယူပါ Gmail Gtalk ရဲ့အခြေခံလျိုဝှက်ချက်များ
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:43 AM0comments
Labels: (စာအုပ်များ)ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ, ဂူးဂဲလ်, နည်းပညာ
ဘယ်မှာသွားသုံးသုံးအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ Gtalk Portable လေးပါ
လို့ ရုံးခန်းမှgtalk ခိုးသုံးဖို့ လေMemorystick ထဲထည့်ပြီးသုံးချင်မှကလစ်လိုက်ရုံပဲ
မတင်ထားတဲ့အခါသုံးလို့ ရပါတယ်လန်းတယ်ဗျနမူနာတင်ပေးလိုက်တယ်နောသုံးနေ ကျပုံစံမဟုတ်တော့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ချက်ချင်သူတွေအတွက်ပါ.
လန်းလန်းလေးချက်ချင်ရင်ဒီမှာDownload ယူပါ Gtalk Portable
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:42 AM0comments
Gtalk မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တစ်ပုံပြီး တစ်ပုံပြောင်းချင်တယ်
ဆိုရင် Gtalk Shell ကိုအင်စတောလုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ အပေါ်မှာပါတဲ့
Shell ဆိုတာလေးကို နိုပ်လိုက်ပါ Options ကိုသွား ဘယ်ဘက်မှာ
Avatar ဆိုတာကို နိုပ်ပြီး Add ကိုနိုပ်ပါ ပြီးရင် ပုံရှိတဲ့ နေရာကနေ ပုံ
ထည့်ချင်တဲ့ပုံများကိုယူပြီး ok ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ ကို Gtalk မှာ
ပုံလေးတွေ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပြောင်းနေတာတွေရမှာပါ…chat box က
ရိုးရိုးGtalk ရော Gtalk Shell ရောဆိုတော့2ကောင့်ဖွင်လို့ ရတာပေါ့
ဆော့ဝဲကိုဒီမှာDownloadယူ ပုံတွေအလိုလိုပြောင်းတဲ့Gtalk Shell
မြန်မာပြည့်ကလူကဒီလင့်ကယူ. Gtalk shell
Gtalk နဲ့Gmail မှာ ပုံတင်ဖို့စာသားအလန်းလေးတွေပါတဲ့
ဒီမှာဒေါင်းလိုက် Gtalk ပေါ်တင်ဖို့ ပုံအလန်းများ.၁
ဒီမှာနောက်တစ်ခု Gtalk အတွက်ပုံအလန်းလေများ..၂
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:41 AM0comments
ကိုလှရွှေ နေမကောင်းဖြစ်လို့ .....မသိန်းကြည်
ငါးသွားရောင်းတာ...တာမွေမှာရေကြီးလို့ တဲ့အဲဒါနဲ့ အမေရိကန်နဲ
ခင်ယုံပါဆို ရင်ခုန်စရာဘာလို့တွေးတာလဲ? ရိုးရိုးသိတာပါဆိုလဲ
ခိုးခိုးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး... ဖုံးဖိနေပေမယ့် အပြုံးအကြည့်တွေက
သိသာတယ်နော်... အခင်မပိုသေးရင်လည်း အရင်လိုလေးပဲ ဆက်ဆံပေါ့...
အချစ်ဆိုတာ ဓါးသွားပေါ်က ပျားရည်စက်တဲ့... တောက်! ဘယ်သူကများ
ပျားရည်တွေကုန်အောင် လျက်သွားပါလိမ့် ..... ငါ့အလှည့်ကျ
ငါချစ်တဲ့ မင်း တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ Q လို့ ပါသွားရင်
မလွမ်းတက်တာတော့ တော်တော်ခက်တယ် ကွာ...
u see i see တော့ဒန်းကျိုးတာပေါ့ u say i say တော.ပန်ကန်ပါးတာပေါ့u no
i no တော.နှစ်ယောက်လုံးအိမ်ရေးပျက်တာပေါ့ Smile
♫ ဘ၀ဆက်တိုင်း England မှာ ဘောလုံးသမား, Korea မှာ မင်းသား,
ဂျပန်မှာယာကူဇာ, US မှာ Mafia, မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အချို့ အချို့ ကပြောတယ်ဗျာ.. မိန်းကလေးများသည် အမျိုးမျိူးပြောင်း
လဲတတ်သည်တဲ့ ... အမျိုး မျိုး မဟုက်ပါဘူးနော်........
ပြန်ရေးလိုက်နော်.. မောင်(ခေတ္တလူ့ ပြည်)
အချို့ အချို့ ကပြောတယ်ဗျာ.. ကောင်ကလေးများသည် အမျိုးမျိူးပြောင်း
ကြိုက်လို့လိုက်တာ မိုက်လို့ခိုက်တာ Fight ဖို့ Case မပါဘူး
လိုက်လို့ညစ်ရင်လည်း မမိုက်လို့ ပစ်တယ်မှတ်လိုက်မယ် But
လိမ်ချင်ရင် ကြိုးကျစ်... ချစ်ချင်ရင် ဘောပင်ဆောင်ထား...
မနက်ဖြန်တိုင်းသာစကား ပြောတတ်ရင်မင်းကိုသတိရ ကြောင်းကိုယ် ကတစ်ဆင့်သူပြောပေးမှာပါ
ဗလတောင့်တယ် ရုပ်ဖြောင့်တယ် .
ရှူ ရှူး ပေါက်ရင် အဝေးကြီးရောက်တယ်
ခင်မင်နေတဲ့တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ စိတ်မခိုင်လို့ ယိမ်းယိုင်မိရင်ခွင့်လွှတ်ပါ
တစ်သက်လုံးပဲ ရင်မှာ သိမ်းဆည်းထားပါ့မယ်
သတိတွေတော့ရသေးတယ် တွေ့ ချင်စိတ်တော့မရှိတော့ပါဘူး
အချစ်ကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ သူမဟုတ်ပါဘူး... အချစ်ကို ဒူးထောက်တောင်းခံ
သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် အချစ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ
စစ်ဗိုလ်တွေရှိတယ်........ ချစ်တတ်တာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုမှ ငါ့ဆီလာခဲ့ပါ .
တစ်ကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာပြောနေကြတဲ့ ယုံတမ်းစကားပါပဲ
ပိုင်ရှင်မရှိပါ -ရည်းစားစကား ပြောခြင်းကိုလက်ခံစဉ်းစားပေးမည်
လူတွေကပြောတယ်အချစ်မရှိရင်သေနိုင်တယ် တဲ့ မဖြစ်နိုင်တာအချစ်က oxygenမှမဟုတ်တာ
အချက်အပြုတ် မောင့် အလုပ်အပြေးအလွှား မောင် ဈေးသွား
အဖွတ်အလျှော် မောင် ပဲနော်ကလေးထိန်းကျောင်း မောင် ပဲကောင်း
ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ မောင့် အဖို့ ..ထင်းမီးသွေးဝယ် မောင် ပဲကွယ်
ဆန်ဆီရှာလည်း မောင် ပါပဲဖျားနာပြုစု မောင် ပဲကု
သို့သော်.............သို့သော်အင်္ကျီဝယ်ချုပ် မောင် မဟုတ်
လက်ဝတ်ရတနာ မ အတွက်ပါဆလင်းဘက်အသစ် မ အတွက်ဖြစ်
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွား မောင် မတားအလှပြင်ဆိုင် မ ပဲထိုင်
အသစ်အဆန်းအထည် မ ပဲဝယ်ဘာပဲပြောပြော မ သဘော......... မ သဘော။
My name is ဖိုးရှုပ်... All call me အမျိုးယုတ်.... I Live in တဲစုတ်.... I
only eat ပဲပြုတ်... I walk in လမ်းစုတ်.. So I meet မိပုတ်... I give her
အမှိုတ်ထုတ်... So she gave me ဆီးထုတ်…
ပုံပြင်ကြိုက်တဲ့ငါ့ကို ပုံပြောကောင်းတဲ့နင်က ပုံပြင်ထဲမှာဘဲထားသွားတယ် ပုံပြင်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ငါပုံပြင်တွေကိုပြန်ဖတ်ပြီး ပုံပြောကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် အခုတော့ငါပုံတွေပြောတတ်နေပြီ
စာကမရ ၀ိုင် သာချ ...စိတ်လေတယ်နော် beer ဆော် ...
အသည်းကကွဲ wiskey ဆွဲ...အပျင်းပြေသောက် spy ဖောက်..
သောက်ပြီးရင်ဇိမ် ဒီ Champain ..ပိုက်ဆံကမွဲ ဘီအီးဆွဲ .. စိတ်ညစ်လို့ထိုင် ခေါင်ရည်ဆိုင်
မုန်းပြီဆိုရင်...1500 ကို 3000 ပေးလည်း လှည့်မကြည့်ဘူး။ အချစ်ဆိုတာ Bus ကားလိုပဲ
ထွက်သွားတဲ့ကားနောက် ပြေးမလိုက်နဲ့မောတယ်... ခဏစောင့်လိုက်..
ကဗျာဆန်ဆန် တွေ့ဆုံခဲ့တာ မဟုတ်ပေမဲ့ ၀တ္ထုဆန်ဆန်ပဲ ခွဲခွာခဲ့တရ် နှလုံးသားကို ငုံကြည့်လိုက်တော့အံသြစရာကောင်းစွာပဲ နှလုံးသားကလည်း ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ကြီး ငိုကြွေးနေတရ်..
သွားပါကွာ။ဟိုကောင်ကကားပါတယ်မဟုတ်လား။အားနာတယ်လဲပြောဖို မလိုပါဘူး။ထုံးစံတွေကိုဖယ် ။ ဒုံးပျံတွေဝယ်နိုင်တဲ့ တစ်နေ မင်းကိုငါလာတွေ့ မယ် ။
ပြီးရင်တော့ဘင်လာဒင်နဲ့ ရတနာခင်တွေ့ သလို အမုန်းဆွဲဗုံးကျဲမှာနော်..တေတွားမယ်
ဦးနှောက်ကို Format ရိုက် ၊ နှလုံးသားကို Partition ပိုင်းပြီး ငါ့အချစ်ကို Antivirus မျိုးစုံနဲ့သတ်ရင်တောင် နင့်ကို ချစ်တဲ့ Virusကဘယ်တော့မှမသေနိုင်ဘူးဆိုတာ နင်ယုံပါဟာ။
Online ပေါ်မှာယောက်ကျားကလေးတွေကို တွေ့ မရှောင်QQစိန်လုပ် သူများ မိုးကြိုး၁၀ခါပစ် ၉ခါမှန်၁ခါထိ ဒိုင်နာကားတိုက်သေမြွပွေးကိုက်ပါစေဗျာ(မန်းကလေးများအနေနဲ့ ပြောင်းပြန် ပြန်ရေးလိုက်နော်ကို့ ဘက်ကိုဦးစားပေးရေးထားတာမလို့ (မောင်ခေတ္တလူ့ ပြည်)
အနိစ္စ အရင်ရည်းစားကမမြဲ ဒုက္ခ ဒီရည်းစားအတွက် သောကများရ အနတ္တ နောင်လာမည့် ရည်းစားကလဲ အစိုးမရ ပြတ်သွားသမျှ ရည်းစားအားလုံးအမျှ အမျှ အမျှ
အာဒံကဧ၀ကို ချစ်တာ အားကျမနေနဲ. သူတို.ကနှစ်ယာက်ထဲ၇ှိလို.ချစ်တာ........ငါကတော.လူတွေအများကြီး၇ှိတဲ.အထဲက နင်ကိုချစ်တာ ဟွန်.နင်းအ၇မ်းကံကောင်းတယ်လို.မှတ်.... _*
VZO ညာနေသည် MIRC ရန်တိုက်ပေးနေသည်FACEBOOK ဗြောင်လိမ်
နေသည်G TAlk ခလောက်ဆံ အကောက်ကြံနေသည် မော်နီတာပေါ်
မှစကားလုံးများနားမယောင်လေနဲ့ သတိထား........။
ဖရဲသီးကို ခွဲကြည့် အတွင်းသားနီရဲနေပေမဲ့ ချိုချင်တဲ့ အလုံးမှချိုတာလေ
ချစ်သူလည်း ဒီလိုပဲ မယုံရင် တွဲကြည့်.... ရင်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်နီးနီး
အစွဲကြီးဘယ်လောက်စွဲစွဲ အတွဲကြီး ဘယ်လောက်တွဲတွဲ မြဲချင်မှ မြဲတာ
(( ဟုတ်တယ်… တို့နှစ်ယောက် အပေါက်ဖောက်ပြီး မူလီစုတ်လိုက်ကြရင်
ဆောရီး... ဒါလေးကတော့ Not for Sale!
ဒါတောင် နင်မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် အသက်ကိုပါပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။
နင့်ဆီက "ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကြားရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
တစ်နေ့မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ဘယ်မှာလဲလို့ နင်မေးလာခဲ့ရင်....
ပျော်ရွှင်ခြင်းက လေထဲမှာလို့ နင့်ကို ငါ တိုးတိုးလေး ပြောပြမယ်။
နင်ရှူရှိုက်လိုက်တဲ့ လေတိုင်းမှာ နင့်ကို ငါပေးမယ့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပါဝင်နေခဲ့တယ်။
မလုပ်ဘူးဟေ့ဆိုရင် အစကတည်းက လုံးဝ မလုပ်ဘူးပဲ…
လောကမှာ ငါမသိတာဆိုလို့ (၂) ခုပဲ ရှိတယ်-
ဟိုဟာလဲ သိဘူး၊ ဒီဟာလဲ သိဘူး၊ ဟီးဟီး
ပြုံးတိုင်းလည်း ပျော်တယ်လို့ မထင်နဲ့........
ရှုံးတိုင်းလည်း လျှော်တယ်လို့ မထင်နဲ့..............။
ငါ့ရဲ့ အခြားတဖက်သို့ သာယာတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ နိုးထနိုင်ပါစေ။
ငြူစူစောင်းမြောင်းခြင်းကင်းတဲ့ တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ....။
မင်းရဲ့ "ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကားကို ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ပျားရည်တွေတောင် ခါးသွားသလိုပဲ။
ငါသတိရတဲ့အချိန် မင်းလွမ်းချင်မှ လွမ်းမယ်။
ငါရူးလောက်အောင် သတိရတဲ့အချိန် မင်းအိပ်ချင် အိပ်နေလိမ့်မယ်။
ငါအရမ်းကို တွေ့ချင်နေတဲ့အချိန် မင်း အခြားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ချင်တွေ့နေမှာပါ။
အဆိုးများထဲက အကောင်းတော့ ရှိနိုင်မယ်။
မြင်တိုင်း လာလာ add ပြီး
ဘယ်တိရစ္ဆာန်မှ အွန်လိုင်း မတက်ဘူးကွ....။
အချစ်ဆိုတာ DOTA ခုတ်တာလောက် ပျော်ဖို့ ကောင်းလို့ လား.............?
NEED4SPEED လောက်ရော ရင်ခုန်ရလို့ လား.......................?
COUNTER STRIKE လောက် ပြင်းထန်လို့ လား........................?
GAMER ပဲ လုပ်တော့မယ်........။
အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် မင်းနဲ့တွေ့မှ
အဲ... မသိချင်ယောင် ဆောင်နေရတာမျိုးကတော့ နည်းနည်းကသိကအောက် နိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့ အနာဂတ်တွေကို မွေးဖွားသန့်စင်လာဖို့ ကြယ်တွေဟာ ကြွေကျပါလိမ့်မယ်။
ပြဒါးသုတ်မထားတဲ့ မှန်တစ်ချပ်ရှေ့မှာ Reflection အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ သုတေသီတစ်ဦးပဲ ....။
နားရွက်တောင် ရှာမတွေ့တော့ဘူး .....။
စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲမှာ ကလေးကအစ ခွေးအဆုံး မခံ့တာလည်းပါတယ်
ဘာမှမလုပ်ဘဲ မိဘလုပ်စာပဲ ထိုင်စားတော့မယ်။
ငါရယ်ချင်လို့ဟ ဆိုပြီး ပြန်ဖြေတယ်။
လာဟိုင်းရင်လည်း ကျွန်တော့်အပြောကိုမစောင့်ဘဲ ပြောစရာရှိသည်များကို တစ်ခါထဲ...ပြောပါရန်။
ကျွန်တော် အရူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ မေးကြည့်မိတယ်။
"သိတော့သိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြောမပြတတ်တော့ဘူး"
"အဲဒါကို သိပြီးကတည်းက ငါခုလို ရူးသွားခဲ့တာပဲ" တဲ့။
Q ချင်ရင် ဒဲ့သာ Q...
နောက်ထပ် ထပ်မဆုံချင်သူများကို block ပါမည် ..
ဆုံဆည်းသည့်ကံ ကုန်သည်ဟု သဘောထားပေးပါ ....။
အခြားတစ်ယောက်နဲ့ Q နေလို့ Busy ပြထားတာကို မသိဘူးမှတ်မနေနဲ့။း(
ချစ်တယ်လို့ ပြောတာကို စိတ်ဆိုးသလား။
အဲဒါဆိုလည်း နင့်ကို မုန်းတယ်... မုန်းတယ်.... မုန်းတယ်။ အကြိမ်တစ်ထောင် မုန်းတယ်။
အခုတော့ နင်ပျော်သွားပြီလား။း)
တောက်... ဘယ်သူကများ ပျားရည်တွေကုန်အောင် လျက်သွားပါလိမ့် ...?
ငါ့အလှည့်ကျ ဓားသွားချည်း ကျန်တော့တယ်...
အခြားတစ်ယောက်နဲ့ Q လို့ ပါသွားခဲ့ရင်...
ငါ့ကို မချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရတာ...
တစ်ခါ Hi ၁၀၀ ကျပ်။ နာမည်မေးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်။ လိပ်စာပါသိချင်လျှင် ၅၀၀ ကျပ်။ အသည်းကွဲ၍လာတိုင်ပင်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်။ ဟိုမေးဒီမေး ၅၀၀၀ ကျပ်။ စစနောက်ပြောင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်။ ရည်းစားစကားပြောလျှင် FREE..
ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကြွေတိုင်းသာ မင်းရဲ့ ဆုတောင်းတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်
မကြာခဏ ကြွေပေးနေမယ့်ကြယ်တွေ ငါဖြစ်ပါရစေ။
စပ်မိထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ဟိုမှာတွေ့လား ဖတ်ပြမယ် စုမိထားတဲ အလွမ်းထွက်သတ်ဟူသမျှ အောက်စီဂျင်ထက်ပေါ့ပါး တိမ်တွေပေါ်မှာကပ်ထားတယ် အရှင်ရင်ဘတ်နဲ့ဖတ်ပါကွယ်....။
ဆရာကျတဲ့နင့်ကိုခါချတယ်.... လာလာမစနဲ့.. ငါ့GF ကနင့်ထက်ပိုပြီး.. အထာကျတယ်.....လူလာမမှားနဲ. ရူပါကတူတာရှားတယ်~ ကောင်မလေး.... နင်...စမူဆာကုလားနဲ... ယူပါလား စူပါစတားပဲ...။
သူငယ်ချင်းကမေးတယ် မင်းအသည်းကွဲနေတာလားတဲ့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် စဉ်းစားကြည့်လေငါက ငါကိုမချစ်တဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရတာ သူကသူကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရတာပါ ငါအနေသာကြီးပါ။
အားတိုင်းchattingထိုင်နေတာ မဟုတ်သလို chatting ထိုင်တိုင်းလည်း အားနေသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေ
...Still we love,
Still we hope,
၈။ ' ရည်းစာစာ '
အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ ပြောတဲ့ စာမဟုတ်လို့
အကြင်နာများဖြင့်သာ လူဦးရေ တိုးပွားစေနိုင်သည်။
Access Denied မကြာခဏဖြစ်သော
ကဲ နင်နဲ့ငါ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ။
နင်ကဂေါက်သီး နင့်မောင်က ဂေါက်တံ
ရူပါ မလန်းလို့ မတူတာမှန်းတယ်လို့
မူယာမကျွမ်း ကြူတာ မစွမ်းပေမယ့်
မင်းအတွက်ဆို suparman လေးလို
ဆရာလဲ ဆရာ့ကို ဆရာမလုပ်ခဲ့ဘူး
အနာဂါတ် ရွှဲရွှဲလေး ဆမ်းကွာ။
ခံစားချက်ကို ထည့်ရင် ဒီတိုင်းမထည့်နဲ့
အချစ်ဆိုတာ ဘက်စ်ကားလိုပဲ
ရပ်စောင့်နေ နောက်တစ်စီး လာလိမ့်မယ်။
အခု ငါတို့ အွန်လိုင်းပေါ်တက်ရမယ်။
အလိမ်အညာတွေနဲ့ တွေ့ မယ်
ကမ္ဘာနှစ်ခြမ်း ဗျမ်းကနဲ ကွဲသွားရင်တောင်
မင်းရှိတဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာ ငါရှင်သန်ပါရစေ။
online ပေါ်မှာ ကျွန်ုပ် အလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်ကတော့
အချို့ မှာကျနော်ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ပြီးအချို့ မှာတော့အင်တာနက်သူငယ်ချင်း
အချို့ မှာတော့အရပ်ထဲမှကြားဖူးနားဝများနဲ့ စာအုပ်ထဲမှစာသားများ
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:40 AM0comments
Hacking AIO( ဟက်ကင်းကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို ကုန်အောင်လေ့လာ)
ဒီဟက်ကင်းဆော့ဝဲမှာ ဟက်နည်း ၁၄၄ မျိုးပါတယ်အကုန်တော့မသုံးကြည့်ရသေး
ဘူးဗျို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ လေ့လာလို့ ရအောင် အရင်တင်လိုက်တယ် ပညာရှာ
လိုသူများ လေ့လာကြပါ အတော်လေးစုံပါတယ် ပတ်စ၀ပ်ပေးထားတဲ့ ကွန်ပျုတာ
တွေကိုပါ ၀င်ဖို့ နည်းတွေပါပါတယ် ဆော့ဝဲအတော်များများ မှာ စာဖိုင်လေးတွေနဲ့ 
ဖတ်ပြီးလုပ်လို့ ကောင်းတယ်တချို့ ကဖတ်လို့ မရဘူး စပိန်ဘာသာလားဘာလား
မသိဘူး ဖတ်ကိုမရဘူး ဖတ်မရလည်း လျှောက်ပြီးအင်စတောလုပ်လိုက်တာ ပညာ
တွေတိုးလာတယ် ၀င်းဒိုးကလည်း တင်လိုက်ချလိုက် စိတ်မပူနဲ့ တချို့ ဆော့ဝဲတွေ
က သုံးမယ်ဆိုရင် Anti Virus ကို ပိတ်ထားမှ ရတယ် ဥပမာ Key logger ပေါ့ဗျာ
အတော်လေး အသုံးဝင်တာနော် ကွန်ပျုတာထဲမှာ ထည့်ထားပြီဆိုရင် အကုန်မှတ်
နေတော့တာပဲ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကတော့ ရှိနေဆဲပါပဲ ကျနော်က
အခြေခံပညာသင်ဆိုတော့ မတတ်သေးပါဘူး လေ့လာနေဆဲ သင်ယူနေဆဲပါလို့ 
၁၄၄ မျိုးထဲမှာ အတော်လေး သဘောကျပြီး သုံးလို့ ကောင်းတာတွေကို သီးသန့် 
နောက်မှထပ်ရေးပါမယ် ဟက်တာတော့မရဘူး ဖက်တာတော့ရတယ် ဟဲဟဲ လေ့
လာပါ ဟက်တာ ဖက်တာလောက် မခက်ဘူးဆိုပဲ အခြေခံပညာသင်တွေအတွက်
စကားလက်ဆောင်ပါ ပညာရှင်မဟုတ် ပညာသင်လေးပါခင်ဗျာ
ဒီမှာ Download ယူပါ Hacking Gmail AIO (144 items)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:31 AM0comments
Labels: ကွန်ပျူတာ, နည်းပညာ, ဟက်ကင်း
မူရင်းလင့်မှာ အသေးစိတ်လေ့လာပါ http://www.dl4all.com
Wifi Hacking နဲ့ပတ်သက်၍ လေ့လာစရာများကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်
Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားသော သူငယ်ချင်း အပေါင်းတို့ အတွက် လေ့လာစရာ
ဆော့ဝဲလေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ် ဥာဏ်ရှိသလို သုံးကြည့်ပါ ကျနော်တော့
လိုက်မမှီဘူး ဖြစ်နေတယ် အသုံးလိုတဲ့သူတွေ စမ်းသပ်ရအောင်မျှဝေလိုက်
ပါတယ် ဟက်တာဟက်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျို လက်နက်ရှိပြီး မပစ်တတ်
တာလား တော့မသိဘူး လိုင်းတွေတော့ ရမလိုလိုနဲ့ပျက်ပျက်ကျ သွားတယ်
မထူးပါဘူး မက်ဒေါနားဆိုင်နဲ့KFC မှာ Wifi အလကားရတယ် အဲ့မှာသွားသုံး
အရေးကြီးသည့်မှာ ရရင် လက်တို့ ကြပါလို့အကယ်၍ အဆင်ပြေပြီဆိုလျှင်
အင်တာနက် Wifi လိုင်းများကို ခိုးယူသုံးစွဲ နိုင်ပေလိမ့်မည်...........။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:30 AM0comments
ကဲစာအုပ်ကတော့ Honest Haking တဲ့ဖတ်ကြည့်မှပဲသိမှာပဲကျနော်တော့စိတ်ဝင်
စားတယ်ဗျစက်ရုံကလိုင်းကိုဟက်ချင်လို့ မေးတွေဘာတွေတော့မဟက်ကြနဲ့ ပေါ့
ခြင်းအလို့ ငှာပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ကဲဟက်ချင်ရင်ဖတ်..အဲ..မှားလို့ ဗဟု
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:29 AM0comments
ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်း မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ Password ပေးပြီး လုပ်ကြသလို ဆော့ဝဲလ်များဖြင့်လဲ ကာကွယ်ကြပါတယ်။ မည်သို့ပင် လုပ်နေလဲ ခိုးသူကအမြဲ သာမြဲ သာနေသည်မှာ ယခုမှ မဟုတ်ပါ။ အခိုးခံရသူများအတွက် ဟာကွက်တစ်ခုဖြစ်သောအချက်တစ်ခုကိုကာကွယ်နိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါ၏။
ကွန်ပျူတာ ၀င်းဒိုးတက် လာပါက မိမိတို့ အမည်ပေးထားတဲ့ User Account ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။။။။ အဲဒီ Account အပြင် Hide လုပ်ထားတဲ့ Administrator Account ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မြင်တွေ့ချင်ရင်
တော့ Ctrl + Alt + Delete ကို နှစ်ခါလောက် နှိပ်လိုက်ရင် Login Box ကျလာမှာပါ။ User နေရာမှာ Administrator ကို ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးထဲ ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက စက်တိုင်းမှာ ဟာကွက် တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေဆဲပါ။ သိသူက ယခု နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဖွင့်သုံးနေမှာပါ။ Administrator Account ဖြစ်တဲ့အတွက် Data အပြင် အခြား application တွေကိုလဲ စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် Administrator Account ကို ပိတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဦးစွာ My computer ကို လုပ် Right Manage ကိုရွေးပါ။ Local User and Groups ကို ဖွင့်ပါ။ User တွင် Administrator ကို Double Click လုပ်။ Box ကျလာရင် Account is disabled ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Apply ၊ Ok လုပ်
ပါ။ဒါဆိုရင် Ctrl + Alt + Delete လုပ်ပြီး ဖွင့်လို့ မရနိုင်တော့ပါ။ အခွေများဖြင့် ၀င်ရောက်နေသည့်နည်းလမ်း များကိုတော့မဆိုလိုပါ။ ယခုနည်းလမ်းသည် ကွန်ပျူတာကို ခိုးယူ သုံးစွဲသူများအတွက်အင်မတန်လွယ်ကူနေ၏။ သို့ကြောင့် ပိတ်ထားမည် ဆိုလျှင် အလွယ်တကူ သုံးစွဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:28 AM0comments
Google Earth ကနေကမ္ဘာပတ်ကြည့်လို့ ရတယ်နော်
Google Earth သာကွန်ပျုတာထဲမှာရှိရင်အိမ်ကိုနေ့ တိုင်းပြန် လို့ ရ
အတွက်ပါInstallလုပ်ပြီးတာနဲ့ ကမ္ဘာအနှ့ံမရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေပါ
အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေယူလိုက်ပါGoogle Earth Download Google Earth Download
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:23 AM0comments
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:59 AM0comments
မှားပြီးဖျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ယူဖို့ Data Recovery Portable ဆော့ဝဲလေးပါ
ကဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှာလို့ ရပါတယ်ပြန်ရှာဖို့Scan ဖတ်လိုက်ရင်သူ့ အမျိုးစားနဲ့ သူ
မယ်လို့ ထင်ပါတယ်မရရင်ချက်ထဲမှာမေးလို့ ရပါတယ်ကွန်မန့် မှာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီမှာ Down Load ယူပါ.မှားဖျက်တာတွေပြန်ပေးတဲ့Data Recovery
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:58 AM0comments
မှားဖျက်မိတာတွေပြန်ရှာပေးတဲ့ Data Recovery ဆော့ဝဲ
Cbox ကတောင်းဆိုလာတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ကျနော်သိသမျှတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါင်း လုပ်ယူပြီးသုံးကြည့်ပါဖိုင်ထဲမှာSerie Keyထည့်ပေးထားပါတယ်အင်စတောလုပ်ပြီးတဲ့
အခါSerie Key ဖြည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါစေမရရင်မေးနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း
ဆော့ဝဲကိုဒီမှာDownload ယူပါ.. Icare Data Recovery
ဒီမှာလည်းယူလို့ ရပါတယ် မူရင်းလင့်ပါ Icare D.R
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:57 AM0comments
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:41 AM0comments